Izinwele ezimfutshane zamadoda, zijonga ngeefoto eziseta iintsingiselo | Amadoda aQinisekileyo
UCarlos Rivera | | Ukunyamekela, Isitayile esinenwele
Uninzi lwamadoda lukhetha i iinwele ezimfitshane. Kwaye siyayenza, ikakhulu, kuba ikulungele ngakumbi ukuyigcina kuneenwele ezinde. Ngale ndlela, sisebenza ngakumbi kunabafazi.
Kulungile ngoku Ngaphakathi kweenwele ezimfutshane kukho izitayile ezingenakubalwa kunye nokusikwa. Kwaye yile, ngokucheba ngalunye sinokwahluka kwindlela yethu yokwenza isitayile okanye iinwele. Kubo bonke abalandeli abathembekileyo beenwele ezimfutshane silungiselele oku kukhethekileyo apho siqokelela khona konke iintsingiselo kunye nesitayile ekusikeni eyenzelwe ngokukodwa iinwele ezimfutshane ukuya kweziphakathi.
2 Isityalo saseFransi
3 Phakathi kwee-bangs ezide
6 IPompadour kunye neToupee
7 Icala lokwahlula kwiinwele ezimfutshane
8 Uhlobo lweMod
Ukutsheva kuklasikhi okungaze kuphume kwisitayile. A iinwele ezilula ezingayiqondiyo iminyaka okanye izitayile. Nokuba uyinxiba ngohlobo oluqinileyo nolungqingqwa, okanye ukuba uyinxiba ngegradient encinci, kukucheba iinwele oko izisa isimilo esininzi kwaye, ngaphezulu kwako konke, ubudoda. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile ukuyigcina ikwimeko efanelekileyo kukuba ndwendwela umchebi weenwele okanye weenwele ubuncinci rhoqo kwiiveki ezimbini. Injani i- khangela Kulula ukufika kukho abo bakhetha ukuzikrwela ekhaya, kule meko uhlala usenza njalo shave kwelinye icala lokukhula kweenwele. Kule posi besele sipapashe kuyo 'Hombres con Estilo' sikunika zonke amanyathelo okucheba ngokugqibeleleyo.
El isityalo saseFransi Ngenye yezona zinto zisikiweyo zokuzonwabisa phaya. Uphawu oluthile amacala amafutshane kakhulu athelekisa nangaphezulu kancinci, umphezulu ophambili ophambili kunye nee-bangs. Singathi lolukhetho lwesibini emva kokucheba kwabo babhejayo kwizinwele ezimfutshane kakhulu. Into abangayaziyo abaninzi kukuba i isityalo saseFransi Yindaleko okanye ukuphindwaphindwa kweenwele zakudala zoMlawuli waseRoma uKesare Awugusto, owayenxibe iinwele zakhe ezaziwayo. Iphumelele kwi-90s phakathi kwezinye izinto kuba uninzi lwabantu abadumileyo njengoBrian ovela 'kwi-Backstreetboys' bayinxibile; kwaye, ngoku, ngo-2016 ibuyile ngamandla kwaye nokuhlala. Ngendlela, oku kunqunyulwa kusebenza kakuhle kuzo zombini iinwele ezithe nkqo kunye ne-wavy kwaye, ukongeza, ngaphakathi kuyo sinokudlala ngobude obahlukeneyo beebhanti.
Phakathi kwee-bangs ezide
I-bangs ze-pop-style ezinde kunokuba ziinguqulelo ze isityalo saseFransi. Kolu cut, i ii-bangs zishiye ixesha elide kwaye zinabantu abaninzi njengamacala, endaweni yokungxama, zishiyeke ithuba elide. Kusikiwe ukwenziwa ngesikere, kushiya indawo yamacala ingalayishiswanga ngokuchasene nomphetho oshushu kakhulu. Isebenza kakhulu kuzo zombini iinwele ezichanekileyo kunye ne-wavy. Iinwele zaba yimfashini kwii-90s ngamaqela afana 'neBlur' kwaye namhlanje ibuye ngamandla ngenxa yokuguquguquka kwayo.
El Iqhubeka Kukucheba okwangoku, iinwele utshayela amanethiwekhi onxibelelwano afana ne-Instagram. Ukucheba iinwele okwenziwe ngokusisiseko nangokuphelayo. Ukunqunyulwa kubonakaliswe phezulu kunye ne-voluminous top, umahluko ngamacala amafutshane ayancipha ukusuka kwixesha elide ukuya elifutshane, ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Ukunqunyulwa kunokwenziwa ngokwenza indalo efihlakeleyo yobude beenwele okanye, ngokuchaseneyo, ukudala umahluko omkhulu kunye nokuphindaphindayo. Olu hlobo lokusikwa lunamathuba amaninzi kangangokuba namhlanje singathi sele iyinto yentsholongwane.
Ukusika okungacacanga kuboniswa ngu izitshixo ezimfutshane ezikhutshwe kakhulu. Ihlala inxitywe ngamacala aqinile kwaye iyenziwa ugxininiso kuzwane phezulu. Kukusika okuguquguqukayo kakhulu ngaphandle kokuba kufutshane kuba kungadlalwa ngeenwele ezahlukeneyo. Isebenza kakuhle ngeenwele okanye i-spiky kwaye, ngendlela efanayo, idlala ngemicu kumacala ahlukeneyo.
IPompadour kunye neToupee
I-pompadour yayinomdla wayo kwii-50s. Iinwele ezibonakaliswe ngeenwele ezidibeneyo ezifana ne-toupee ekhutshwe ngeli xesha ngokubonga kwi-'Grase 'okanye i-Elvis eyaziwayo. Nangona, ingaziwa ngumntu wonke, kukuba igama lalo linetyala kwigosa eliphezulu uMadame Pompadour, ongomnye wabathandi bakaLouis XV, owayenxibe le bangs iphakamileyo kwaye inamandla. Kule mihla wenze ukubuya okuqinileyo ngenxa yeempawu zesitayile ezinje ngoDavid Beckham okanye uBruno Mars. Ipompadour yanamhlanje iphinde yavuselelwa ngamacala aphelileyo kunye namfutshane, ngokuchasene ne-bushy bangs enkulu..
Icala lokwahlula kwiinwele ezimfutshane
Umgca ukuya kwicala ngu enye yeeklasikhi zokucheba iinwele zamadoda ezingaphumiyo kwisitayile. Ngapha koko, sisinwele ebesisoloko sihamba ukusukela kwiminyaka ye-4. Ayikaze iyeke ukuhanjiswa. Amacala okwahlulahlula iinwele zasendle, isitayile esifanele amadoda amaninzi kwaye inganxitywa zombini iinwele ezimfutshane kunye neenwele ezinde. Uhlaziyo lwamva nje lokusika ngulo uphawula umgca ngendlela esisigxina, isiphumo esifunyenwe ngokusoba ngexesha lokusikwa ngomatshini wokucheba.
Iphumelele kwiminyaka engamashumi amathandathu eyaziwayo sisizwe sasezidolophini esinemvelaphi yesiNgesi. Inkqubo ye- Mods bayenzile le fashion iinwele ezimfutshane ezithe nkqo ze-bangs ezinamacala amade amade aye abonakale kwiindawo ezithile ezinje ngamanxeba asemacaleni. Ukusikwa kunokunxitywa njengoko sibona ngokuhamba kancinci kwiziphelo okanye ukudibanisa isiphumo esigudileyo. Amaqela afana ne-'Oasis 'abe yintshatsheli yoku kunqunyulwa okuqala ukuba nemfashini kwakhona.
Ukusikwa kuphawulwe nge-asymmetry enkulu apho amacala aqinileyo kakhulu athelekiswa ne-bangs ende kakhulu. Singayibeka ngokwahlukileyo Iqhubeka, njengoko ikwaphunyezwa ngobuchule begradient okanye fused. Kumaxesha akutshanje iye yaba yimfashini ngenxa yemvumi uJustin Bieber, oyinxibe ngeenwele ezimhlophe zeplatinam. Namhlanje, kukho abo baphawule ubugqwirha boku kusikwa ngemigca echetyiweyo kumacala aphunyezwe ngesitshetshe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izinwele ezimfutshane
Izinwele Zamadoda sitsho
Ngaphandle kwamathandabuzo, iinwele ezimfutshane zingumtshangatshangiso! Kulula kakhulu ukuyenza, ixesha elincinci kwisitayile, kwaye zijongeka zintle! Ukusika okuhle kubonisiwe.
Phendula kwiinwele zeenwele zamadoda
UZara ubhejela ii-sequins kunye nevelvet yexesha elizayo elisemthethweni